Jowhar.com : Somali Leader News - News: Qoys Soomaaliyeed oo ku nool Norway oo laga qaatay afar caruur ay dhaleen
April 21 2014 05:31:42
Qoys Soomaaliyeed oo ku nool Norway oo laga qaatay afar caruur ay dhaleen
Qoys Soomaaliyeed oo ku nool dalka Norway ayaa lagala wareegay caruur ay dhaleen, kadib markii lagu eedeeyay inay dacayeen wiil saddex jir ahaa oo ka geeriyooday.
Hey'adda Bad baadada caruurta Norway ayaa qoyskan kala wareegtay afar caruur, iyadoo hey'adu ku canaanatay Hey'adda inay dayacyeen wiilkooda, isla markaana uu geeriyooday xili uu la ciyaarayay walaalihiisa kale.
Qoyska laga qaatay 4 wiil oo ka ugu wayni 6 sano jir yahay ayaa la sheegay inay ku cusub yihiin dalka Norway isla markaana ay ahaayeen qoys daryeelka ubadkooda iyo xidhiidhka bulshada Soomaaliyeed ee ay la nool yihiinba ku wanaagsan balse wiilka sida deg dega ah uga dhintay darteed carruurta kale looga qaaday.
Labada waalid ee caruurta laga qaatay ayaa waxay ku nool yihiin magaalo yar oo ku taal waqooyiga dalka Norway, waxaana hooyada iyo aabaha dhalay magacyadooda lagu soo gaabiyay Maxamed iyo Fahiima.
Arritan ayaa ah mid aad looga hadal haayo dalka Norway, iyadoo dhacdadan aanay aheyn markii u horeysay oo qoys Soomaaliyeed lagala wareego caruurtooda.
0 Comments · 2590 Reads
Jowhar.com691,531 unique visits